Maitiro Ekuvakwazve Uye Kuwanazve Kuvimba Mushure mekunyepa: 10 Hapana Bullsh * t Matipi! - Ukama
Sei Kuvakazve Uye Kuwanazve Kuvimba Mushure mekunyepera kune Wako Partner
Wanyepa. Unozvidemba. Asi iwe unoitei izvozvi?
Kuvimba ndiyo hwaro chero hukama. Hazvina mhosva kuti hukama hwako hunotora fomu ipi kana miganhu yawakamisa , kugona kuvimba kuti mumwe wako ari kukuudza chokwadi kunokosha.
Kune rimwe divi, isu tiri vanhu chete uye, dzimwe nguva, tinokanganisa zvinhu. Hazvina mhosva kuti vavariro dzedu dzakanaka sei, tinokanganisa.
Kunyepa kunokambaira mukati kunogona kuva chiratidzo chekuti chimwe chinhu hachina kunyatsonaka muhukama hwako.
Asi kukanganisa uye kuisa panjodzi yekurasikirwa nemumwe munhu waunoda kunogona zvakare kunge iri jolt yaunoda kuti uzive izvo zvaunazvo, uye zvinotyisa sei kurasikirwa nazvo.
Wakambozviwana uchireva nhema kune mumwe wako? Une iwe vasina kutendeka ? Iwe hauna kunge wanga uripo kwavari panguva dzavaikuda chaiko here?
Kana iwe uri kushamisika kuti iwe kana kwete iwe unogona kuchengetedza hukama hwakakosha kwazvo kwauri, usaora mwoyo izvozvi. Iko kune kuda, pane tarisiro nzira.
Chokwadi, kutsemuka kunogona kumhanya zvakanyanya uye zvinogona kunonoka. Uye kana uchikwanisa kuichengeta, zvinotora basa rakaipisisa.
Zvisinei, kana iwe uchida kuisa simba uye kuzvipira mukati uye nekugamuchira mutoro wezvawakaita, hukama hwako hunogona kudzoka huchirwa, uye kutosimba kupfuura zvazvaive pakutanga.
zvinhu zvaunoda mumukomana
Hezvino zvinhu zvishoma zvakakosha zvekutora izvo zvinogona kubatsira kuvaka patsva kuvimba uye kupodza hukama hwako.
Mamiriro ezvinhu ega ega anozove akasiyana kune vese vaviri saka izvi hazvingambove zvakakwana, zvisina musoro gwara…
… Asi, kana wakatsunga kuchengetedza hukama hwako, unofanirwa kuwana kurudziro pano kuti utange kurapa kusawirirana pakati pako nemumwe wako.
1. Isa Makadhi Ako Patafura
Kana iwe watyora kuvimba kwaivapo muhukama, iwe unofanirwa kuzvibvuma uye kutora mutoro nezvazvo.
Zvinhu zvinoda kuiswa pachena kuti imi mose muzive zvaitika uye pamamire.
Kana iwe usina kutendeka, vadzivise iwo chaiwo, gory ruzivo, kunze kwekunge ivo vakanyatso kuvabvunza. Pakadaro unofanira kuva akatendeseka.
Mumamiriro ezvinhu akadai, chirevo chekare 'kutendeseka ndiyo yakanaka mutemo' ndeyechokwadi kupfuura nakare kose. Kubva ikozvino zvichienda mberi, kunyangwe nhema diki dzaunotaura dzinogona kuita kuti mumwe wako afungire kuti pane chauri kuviga.
Kana iwe wafunga kuti iwe unoda kugara muhukama hwako mushure mekuputsa kuvimba, usadonha mumusungo wekuedza kutsvaira pasi petipeti uye kunyepedzera kuti ichangonyangarika.
Ichakubvisira iwe, uye mikana ndeyekuti chokwadi chinobuda pane imwe nguva, uye chichava chakanyanya kunyanya kana chikadaro.
Nhema dzinoreururwa nekukurumidza chinhu chimwe chete, asi pamusoro pevhiki, mwedzi, uye makore iwe uchazviwana uchitaura mimwe mizhinji yemanyepo madiki kuvhara nhema dzekutanga.
Izvi zvinoreva kuti kana mumwe wako awana chokwadi (uye zvinowanzoitika nguva dzose, kwete kana), kuchengetedza hukama hwako hakuchakwanisika.
Kuedza kuvanza zvawakaita inzira-yemoto yekumisa hukama hwako, munguva pfupi.
2. Funga Chikonzero Nei
Kuti vadzokere kuvimba kwavo, mumwe wako ari kuzoda kuziva kuti sei waita zvawakaita. Saka iwe unofanirwa kuve neyakareba yakareba kufunga nezve izvo zvakakusunda iwe kuti utyore kuvimba kwavo.
Iva akatendeseka zvachose kwauri uye usanyara kure nezvakaoma chokwadi. Nzira chete yekugadzirisa dambudziko iri kusangana naro rakanangana.
Rangarira kuti hausi kuyedza kuwana kururamisa pano, kana chinja mhosva kune mumwe munhu . Uri kuyedza kusvika pasi pehunhu hwehunhu hwako kuti ugone kuzvitsanangudza kune mumwe wako uye usanyanya kushaya maitiro.
3. Kumbira ruregerero
Paunoudza mumwe wako chokwadi, usaedze kuzvipembedza. Kumbira ruregerero kubva pasi pemwoyo wako. Uye chireve.
Ramba wakatarisana nemeso, uye ita shuwa kuti muviri wako mutauro unowirirana nemashoko anobuda mumuromo mako.
Kana iwe ukati hauchazozviita zvakare, ita shuwa kuti ndicho chokwadi chiri mumoyo mako.
Kana iwe uchifungidzira kuti hunhu uhwu chingave chinhu chaunodzokorora, pamwe unofanirwa kufunga kuti hukama hwacho hwakakunakira here, kana kuti imi mese zvingave zviri nani kuenda nenzira dzenyu dzakasiyana
Paunenge uchinge wakumbira ruregerero uye kuva akatendeseka zvachose navo, rega vabude.
Zvinogona kuvatorera nguva kugadzirisa zvawataura, asi kana vagadzirira, teerera kune zvese zvavanotaura nezve mamiriro acho.
Teerera zvakanyanya nekuchenjerera kune zvavanotaura zvavanoda kubva kwauri kuenda kumberi, uye zvikonzero nei.
5. Tsvaga Rubatsiro rweUnyanzvi
Mumamiriro ezvinhu akaita seizvi, rubatsiro rwevaviri varapi kwauri uye rwevanopa mazano 'kunewe nemumwe wako runogona kubatsira zvinoshamisa.
Kuenda kumatanho ekurapa iwe pachako kunogona kukubatsira kuti usvike pasi pechikonzero nei waita zvawakaita uye izvo zvaunoda zviri.
Ukaona kuti iwe kunyepa zvekumanikidzira uye isingakwanise kuchinjisa hunhu, murapi zvirokwazvo izano rakanaka kukubatsira kuti uone kuti nei uye nekupfuura nepfuura.
Zvikasadaro, hakuzove nerubatsiro rwakawanda rwehukama hwako, sezvo zviitiko zvinodzokororwa zvekunyepa zvinodzinga kunyangwe avo vanokanganwira zvakanyanya kune vamwe
Kupinda kurairwa semurume nemukadzi zvinoreva kuti muchaita hurukuro dzamungadai musina kuzombokwanisa kuita dai maingova imi vaviri. Nezve izvi, isu tinokurudzira zvikuru iyo online sevhisi kubva. Iwe unogona kuita nhaurirano dzakakosha dzauchazoda kuva nadzo uchibatsirwa neyanyanzvi yehukama yakadzidziswa, zvese kubva kunyaradzo yeimba yako wega.
Ratidza mumwe wako kuti wakakomba sei uye kutaura kune mumwe munhu izvozvi kana kuronga chikamu chezuva uye nguva yekukodzera iwe.
Kana iwe uchikwanisa kutenga kurapwa, inogona kunge iri mari yakanakisa mune yako mufaro uye hukama hwako hwauchazomboita.
6. Tarisira Kuti Itore Nguva
Usazvinyengedza kuti mumwe wako haasi kuzoda nguva yekugadzirisa izvi. Uye usaise chero rudzi rwekumanikidza pavari kuti vavimbe newe zvakare vasati vagadzirira.
Zvichienderana nekuoma kwemanyepo uye nehunhu hwemumwe wako, zvinogona kutora nguva yakareba kuti vagadzirise zvinhu uye vakuregerere, uye zvakanaka.
Kana iwe uri wakasimba nezvekugara muhukama, iwe unofanirwa kuve unoshivirira uye unomirira kuti vauye kwauri.
Panguva ino, maitiro ako anofanirwa kutsigira kukumbira kwako ruregerero. Ndinovimba, kana nguva yapfuura, imi vaviri muchakwanisa kuvaka zvakare hukama hwekuvimba hwawaimbofarira.
7. Usatarisira Kuti Vanzwe Shungu Newe
Chokwadi, ino haizove nguva iri nyore kwauri, asi iwe wakazviunza pauri uye zvirokwazvo harisi basa remumwe wako kuti unzwe zvirinani.
Kana iwe uchida kutaura kana kuda fudzi rekuchema pariri, taura nezve zvinhu nachiremba wako kana shamwari ine rairo raunovimba.
8. Iva Akavimbika
Kubva ikozvino zvichienda mberi, zviito zvako zvese zvinogona kunge zvichiongororwa, uye uchafanirwa kuzvigamuchira.
Saka, ratidza kumusoro. Chengeta shoko rako. Omerera kuzvirongwa. Zvipire ruzivo nezve kwauri uye zvauri kuita. Ratidza mumwe wako vanogona kuvimba newe, nemaitiro aunoita mazuva ese.
9. Usaite Zvivimbiso Zvausingakwanise Kuchengeta
Iva nehanya zvikuru nezvipikirwa zvisina maturo.
Usavimbisa chero chinhu chausina chokwadi kuti unokwanisa kuendesa. Chero nguva yaunotadza kuchengeta vimbiso yako inozoshanda kusimbisa iyo pfungwa mupfungwa yemumwe wako kuti haugone kuvimbwa nayo.
Hapana akakwana, uye tese tinokanganisa. Kana iwe uchinyatso kuyedza kugadzirisa uye kugadzirisa kukanganisa kwawakaita, zvipe iwe kiredhiti chikwereti nezvazvo, uye rega kuzvivenga.
Panzvimbo pokupedza nguva uchinetseka nezve izvo zvawakaita, isa simba rako mukuve akavimbika, akavimbika munhu waunoda kuve.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekuita kuti mumwe wako akuvimbe newe zvakare?Teerera, zvichatora nguva uye yakawanda yekuedza pane yako chikamu. Zvinogona kubatsira kuve nehungwaru hutungamiriri pane zvekutaura, maitiro ekuzvibata, maitiro ekuita kana vakutsamwira zvakare (nekuti vanogona kudaro). Iwe unomira mukana uri nani wekuchengetedza hukama hwako pane kuti uende wega.Saka wadii kutaura online kuukama nyanzvi kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira kufamba ichi chinonyengera chikamu chehukama hwako. Simply.
mameseji zvakanyanya pamberi pekutanga zuva
Sei Kumira Kunyepa Mune Angori 6 Matanho!
Nei Kureva nhema NeKusiyiwa Kunongokuvadza Uye Kukuvadza Kuhukama
Nzira Nhatu Dzinonyepa Dzine Uturu Kune Hukama
Kuvimbika Kunorevei Muhukama?
Maitiro Ekuita Mumwe Munhu Kunzwa Akakosha, Anodiwa, Uye Akakosha
Maitiro Ekuvimba Zvakare zvakare: Kudzidza Kurega Mumwe Munhu Mukati Kunyangwe Akarwadziwa Kare
Kana Iwe Uri Kunzwa Kuodzwa Mwoyo Muhukama Hwako, Ita Izvi Zvinhu Zvomwe
9 Nzira dzeKubata Nekutengesa Uye Kuporesa Kubva Mukurwadziwa
kusarudza sei pakati pevanhu vaviri
hupenyu zuva rimwe panguva
maitiro ekuita awa kuenda nekukurumidza
unotora nguva yakareba sei usati waita wega
alice musmondland ndakapenga quote
akaroora uye akadanana nemumwe munhu
maitiro ekugadzirisa hukama hunonamira